नेकपाका मेयरहरू चीनमा पढ्दै ! spacekhabar
नेकपाका मेयरहरू चीनमा पढ्दै !
चीनविज्ञ डा.सागर न्यौपानेले उक्त कार्यक्रमको समन्वय गरेका हुन्। न्यौपानेसमेत अहिले सोही टोलीमा छन्। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सबै खर्च चीन सरकारले नै व्यहोर्नेछ। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ६, २०७६, ०७:०७:००